Malunga nathi - iShanghai Yangli Ifenitshala yezixhobo zeFanitshala., Ltd.
I-Shanghai Yangli Ifenitshala yezixhobo zeFanitshala.
Uya kuziva kwangoko inkonzo yethu yobuchule kunye nenyameko.
Ukunamathela kwifilosofi yeshishini lokuthembeka nokuphatha abantu ngokulinganayo, i-GERISS izibophelele ekunikezeleni abathengi ngeenkonzo ezisemgangathweni ezisemgangathweni.
Siyakwamkela ukuba undwendwele inkampani yethu, umzi-mveliso kunye nendawo yethu yokubonisa ebonise iimveliso ezahlukeneyo eziza kudibana nolindelo lwakho.
Ukuba unayo imfuneko kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda uqhagamshelane nathi ngoku. Sijonge ukuva kuwe kungekudala.
Inkampani yethu i-SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD eyasekwa ngo-1999, ijolise kuphuhliso lwezinto zefanitshala kunye nemveliso. Ngoku sisebenza amaziko amabini e-R & D kunye nemeko yeziseko zemveliso yobugcisa eShanghai naseFoshan, kwiphondo laseGuangdong. Iimveliso zethu zithengiswa phantsi kweempawu ezintathu ezaziwayo:YANGLI, GERISS, HIFEEL. ZiyiNkqubo yeDrawer, iZilayidi ezifihliweyo, iZilayidi ezivelisa ibhola, iZilayidi zeTheyibhile, iihenjisi ezifihliweyo, izibambo, iihenjisi ze-oveni kunye nezinye izinto zefanitshala zefanitshala, ezisetyenziswa kwifenitshala, iikhabhathi, izixhobo zasekhaya kunye neselfowuni. Iimveliso zethu ziye zaziwa phakathi kwamazwe angaphezu kwama-40 ehlabathini.
Ifilosofi yethu yeshishini isekwe kumgaqo othi "Ujikeleze isibhakabhaka kunye noMhlaba oSikwere, ukuzama nokuFunda", intetho yesiTshayina yemveli. Abasebenzi bethu bazuze ilifa kwaye baphila ngalo mthetho-siseko wokuba akukho nto inokufezekiswa ngaphandle kwezithethe okanye imigangatho, kwaye ishishini lethu kufuneka lithobele imigaqo nemigaqo kwindlela yethu yemihla ngemihla. Sikhuthaza ngamandla ukuphuculwa okungapheliyo kunye nophuhliso lweemveliso zethu kunye neenkqubo kugxininiswa kwimikhwa yokuziphatha.
Emva kwayo yonke imizamo yethu kwizixhobo zefanitshala, kubandakanya isilayidi sedrowa, iikhabhathi ihenjisi, ihenjisi yehenjisi, izibambo kunye nezinye izinto zokulinganisa, sizuze udumo oluphezulu phakathi kweekhabhathi zaseMelika, ifanitshala eqinileyo, isixhobo sasekhaya kunye nezinye iinkalo.